Coronavirus Ribbon: Mavara, Kureva, T-Shirts, Bumper Magnets, & Zvimwe! - Iphone
kamera blurry iphone 6 plus
foni haigoni kubatanidza kune wifi
sei kugadzirisa voicemail pane iphone
Coronavirus Ribbon T Shirts
Munhoroondo yese, maribhoni yanga iri nzira huru yekuratidza rutsigiro nekusimudzira kuziva nezvezvikonzero zvakakosha munguva dzakaoma. Isu takagadzira ribhoni reCoronavirus COVID-19 senzira diki yekuratidza kutsigira kwedu kune wese munhu akabatwa nedambudziko, kunyanya vashandi vedu vezvehutano vari kumberi uye nevanhu vane hupenyu hwakarasika kuchirwere ichi chinotyisa. Muchikamu chino, isu tichatsanangura iyo zvichireva kuseri kweCoronavirus Ribbon uye zvazvinomiririra .
Tinya apa kushanyira chitoro chedu uye kuona Coronavirus ribhoni T-shirts, zvitambi, uye zvimwe . 100% yezvese purofiti inoenda kune rudo!
Iyo Coronavirus Ribbon
Iyo Coronavirus Ribbon ine mativi maviri, uye kune mavhezheni maviri: imwe ine zvinyorwa, uye imwe isina. Rimwe divi reribhoni rakachena chena, uye rimwe divi muraraungu. Isu tichatsanangura zvinoreva kumashure kwemativi ese maviri eCOBV-19 ribhoni mushure muchinyorwa chino.
Yakakwira-resolution resolution ye Coronavirus ribhoni isina chinyorwa (3000 × 3000 pixels, 819 KB yakajeka PNG faira)
Yakakwira-resolution resolution ye Coronavirus ribhoni ine COVID-19 zvinyorwa (3000 × 3000 pixels, 1 MB yakajeka PNG faira)
Zvinoreva Kuseri Kwemavara
Rutivi ruchena rweCoronavirus Ribbon rinomiririra rutsigiro rwevane hushingi, vanehunyanzvi vezvekurapa vanotsungirira munguva dzakaoma zvakanyanya. Isu tinopa rukudzo kune avo vanoisa pangozi hutano hwavo uye hupenyu hwakanaka kuchengetedza hutano hwevamwe, uye vanoshanda seyedu yekutanga - uye yekupedzisira mutsara wekuzvidzivirira pakupararira kweCoronavirus neCOVID-19.
Ribhoni jena rave kuwedzera kushandiswa kukudza vashandi vehutano zvisati zvaitika, kunyanya mu Utah uye Michigan . Zvakawanda uye zvakanyanya, tiri kuona vanhu vanofara kubva kumabalkoni avo nemavharanda sevashandi vezvehutano vanoenda kune imwe shanduko.
Tinokukurudzira kuti ubatane nesu mukutora chinguva zuva rega rega kufunga nekukudza iro basa risinganzwisisike riri kuitwa nevashandi vezvehutano. Izvi zvinosanganisira vanachiremba, manesi, maneja, vanochengeta, nevamwe vese vanoshanda siku nesikati kuona kuti zvipatara zvedu zvinokwanisa kurapa vanhu vakawanda sezvinobvira.
Rutivi rwemurarabungu rweCoronavirus Ribbon rinomiririra tariro iyo iri 'kumagumo kwemurarabungu.' Izviwo zvichapfuura. Izvo zvakare zvinomiririra kubatana kwehutachiona husingabvume miganhu yedzinza, chinamato, nyika yedu. Nyika inouya pamwechete munguva dzekutambudzika, uye pfungwa neminamato yedu kune vese kutenderera pasirese vari kubata neCOVID-19. Pamwe chete, isu tichapfuura nedambudziko iri.
Neapo ndizvo zvakawanda kuva netariro nezvazvo. Kuitwa kwemitemo yekupararira munharaunda kwave kuita zvakawanda kumisa kupararira kwe COVID-19. Nyanzvi dzezvekurapa mumatunhu akafanana California uye Kansas vane tarisiro yekungwarira kuti kushamwaridzana munharaunda uye kuzvisarudzira kwakadzivirira kuwanda kukuru mumatambudziko eCoronavirus.
Isu takaona vatungamiriri venyika vachiuya pamwechete uye vachibatana pamhinduro kudambudziko iri. Nyanzvi dzezvokurapa dziri kufamba nenyika kuti vabatsire vamwe vanoshayiwa.
Vanhu vanobva kwakasiyana-siyana kugadzira mamaki ekuzvigadzirira kubatsira vashandi vemuzvipatara kugara vakachengeteka sezvavanorapa varwere. Nharaunda dzemunharaunda dziri kugadzira zvirongwa zvekudyidzana kubatanidza vavakidzani vanoshaya. Mamirioni emadhora ari kuunganidzwa kune anobatsira anobatsira avo vanonyanya kukanganiswa necoronavirus.
Coronavirus Ribbon Zvigadzirwa
Isu takagadzira yedu vhezheni yeCoronavirus logo kuti ishande zvakaringana pamotokari bhamba sezvazvinoita paT-Shirt. Kune avo vanosarudza nzira isinganzwisisike, murarabungu ribhoni rega rinotaura zvakawanda. Kune avo vanosarudza zvinyorwa, mutauro wakapusa 'COVID-19' unojekesa chikonzero chedu. MaBhaibheri ese ari maviri anowanikwa muchitoro chedu.
Dzvanya pane hembe pazasi kuti uione muchitoro. Mavara mazhinji aripo, uye mahembe maviri ari $ 19.99 chete.
Dzvanya paT-shati kuti uone muchitoro
100% yemubairo inoenda yakananga kumasangano anobatsira vanhu vanobatwa neCoronavirus!
Iko Kwokutenga Coronavirus Ribbon T-Shirts, Bumper Magnets, Stickers, uye Dzimwe COVID-19 Tribute Merchandise
Unogona kusimudzira ruzivo uye kuratidza rutsigiro rwako pachikonzero ichi nekutenga ribhoni rekonavirus kubva kwatiri Chitoro cheTespring .
Kugovera iyo coronavirus ribhoni kunobatsira kusimudzira kuziva kwechirwere ichi uye nekuyeuchidza vamwe kuti vatevere iyo Center For Disease Control's COVID-19 nongedzo . Gara pamba sezvaunogona. Kana iwe uchinyatsoda kuenda kuruzhinji, chengetedza matanhatu tsoka yedaro pakati pako nevamwe. Shamba maoko ako kazhinji. Dzivisa kubata kumeso kwako nebvudzi.
Kana uri kumba, zvakakosha kuchenesa uye kuisa utachiona kuzvinhu zvaunobata kazhinji. Izvi zvinosanganisira foni yako, TV iri kure, komputa, uye chero chinhu chaunogona kufunga nezvacho. Uye, zvechokwadi, usakanganwa kugeza maoko ako!
Isu takagadzira vhidhiyo yekudzidzisa kuti tikudzidzise maitiro ekuchenesa zvakanaka uye disinfect foni yako . Nhare mbozha dzine kakapetwa kagumi zvakapetwa kupfuura chigaro chepakati chimbuzi, saka ndokumbirawo rangarira kuchichenesa!
Iyo COVID-19 Ribhoni, Yakatsanangurwa
Ndatenda nekuverenga ichi chinyorwa nezve iyo Coronavirus ribhoni uye kuti ayo mavara anorevei. Inzwa wakasununguka kurodha zvifananidzo zviri muchinyorwa chino uye ugozvigovana nevanhu vaunoziva. Siya chirevo pasi pazasi uye utiudze kuti uri kubata sei mamiriro acho. Uye pamusoro pezvose, gara wakachengeteka! Mifungo yedu neminyengetero zvinewe mose.